"ချန်ပီယံလိဂ် သရဖူကို ရီးယဲယ် ပထမဆုံး ကာကွယ်နုိုင်မလား" | dawnmanhon
"ချန်ပီယံလိဂ် သရဖူကို ရီးယဲယ် ပထမဆုံး ကာကွယ်နုိုင်မလား"
ချန်ပီယံလိဂ်လို့ အမည်ပြောင်းခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂-၉၃ခုနှစ်ကစလို့ ဥရောပရဲ့ အကောင်းဆုံး ကလပ်အသင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ချန်ပီယံအသင်း တွေ သရဖူ ကာကွယ်နုိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာ ၂၇နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ရီးယဲယ်က ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ အစောပိုင်းမှာ ဥရောပချန်ပီယံ အနေနဲ့ ဆက်တိုက် ၅နှစ်ရခဲ့ဖူးပါ တယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဘန်ဖီကာ၊ အင်တာမီလန်၊ အိုင်းယက်စ်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၊ လီဗာပူးလ်၊ နော့တင်ဟမ် ဖောရက်စ်၊ အေစီမီလန်တို့ အားလုံး သူတို့ရဲ့ ချန်ပီယံ သရဖူတွေကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၁၉၉၂နှစ်စလို့ ချန်ပီယံလိဂ်အမည်နဲ့ ပြိုင်ပွဲသစ်မှာ ချန်ပီယံတွေ ဖုိုင်နယ်တက်ခဲ့ကြတာ ၄ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အေစီမီလန်၊ အုိုင်းယက်စ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ တက်ခဲ့ ကြတာပါ။ အေစီမီလန်က ၁၉၉၄မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ၁၉၉၅ဖိုင်နယ်မှာ အုိုင်း ယက်စ်ကို ၁ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါ ၁၉၉၅ ချန်ပီယံ အိုင်းယက်စ်က လည်း ၁၉၉၆မှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ရှုံးခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်စ်ကလည်း ၁၉၉၇မှာ ဒေ့ါမန်ကိုရှုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံတွေ နောက်ဆုံး ဖိုင်နယ်တက်ခဲ့တာက ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက် တက် တက်ခဲ့တာပါ။ ဖို်င်နယ်မှာ ဘာစီလုိုနာကို ၂ဂိုးပြတ်နဲ့ ရောမကွင်းမှာ ရှုံး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၆ချန်ပီယံ ရီးယဲယ်က ၅သင်းမြောက် သရဖူ ကာကွယ်မယ့် အသင်းအဖြစ် ဖိုင်နယ်တက်လာခဲ့ပါပြီ။ ချန်ပီယံလိဂ် အမည်နဲ့ ၂၇နှစ် အတွင်း ပထမအဆုံးအကြိမ် သရဖူ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အသင်းအဖြစ် ဇီဒန်းနဲ့ ရီးယဲယ်က အသင်းသားတွေကတော့ ဆန္ဒပြင်းပြနေကြတာပါ။ ရီးယဲယ်နဲ့ တွေ့မယ့် အသင်းကလည်း ဒီနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အကောင်းဆုံး ခံစစ်ပိုင်းကို ပိုင်ဆုိုင်ထား တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ကလည်း ဒီရာသီဖလား ၃လုံးမျှောင် လင့်နေတဲ့ အသင်းဖြစ်လို့ ရီးယဲယ်အတွက် အခက်တွေ့မယ့် ဖိုင်နယ်ပွဲပါ။ လာမယ့် ဇွန်လ ၃ရက်နေ့၊ စနေနေ့၊ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၇နာရီ ၄၅မိနစ်( မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁နာရီ ၁၅မိနစ်)မှာ ဝေးလ်စ်က ထောင်စုနှစ်ကွင်းကြီးမှာ ရီးယဲယ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ ဖုိုင်နယ်လုမှာဖြစ်လို့ ရီးယဲယ်က သရဖူ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ပထမဆုံးအသင်းဖြစ်လား........ ဒါမှဟုတ် ၁၉၉၆မှာ နောက်ဆုံးရခဲ့ပြီးမှ ဖိုင်တက်ခဲ့တဲ့ ၄ကြိမ်စလုံးကို ရှုံးခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အတွက် ၅ကြိမ်မြောက်မှာ ကံကောင်းနုိုင်မလား.............
"ချန်ပီယံလိဂ် အအောင်မြင်ဆုံး အသင်းများ"
၁) ရီးယဲယ် - ၁၁ကြိမ်
၂) အေစီမီလန် - ၇ကြိမ်
၃) ဘိုင်ယန် - ၅ကြိမ်
၄) ဘာစီလိုနာ - ၅ကြိမ်
၅) လီဗာပူးလ် - ၅ကြိမ်
၆) အိုင်းယက်စ် - ၄ကြိမ်
၇) အင်တာမီလန် - ၃ကြိမ်
၈) မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် - ၃ကြိမ်
၉) ဂျူဗင်တပ်စ် - ၂ကြိမ်
၁၀) ဘင်ဖီကာ၊ နော့တင်ဟမ်ဖောရက်စ်၊ ပေါ်တို - ၂ကြိမ်
၁) အေစီမီလန် ၄-၀ ဘာစီလိုနာ ( ၁၉၉၄)
အိုင်းယက်စ် ၁-၀ အေစီမီလန် ( ၁၉၉၅)
၂) အိုင်းယက်စ် ၁-၀ အေစီမီလန် (၁၉၉၅)
ဂျူဗင်တပ်စ် ၁-၁ အိုင်းယက်စ်( ၁၉၉၆)
၃) ဂျူဗင်တပ်စ် ၁-၁ အိုင်းယက်စ် ( ၁၉၉၆)
ဒေ့ါမန် ၃-၁ ဂျူဗင်တပ်စ် ( ၁၉၉၇)
၄) မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ၁-၁ ချယ်လ်ဆီး ( ၂၀၀၈)
ဘာစီလုိုနာ ၂-၀ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ( ၂၀၀၉)
"ဖိုင်နယ်ပွဲမတုိုင်မီ ရီးယဲယ် - ဂျူဗီ မှတ်တမ်း"
ဖိုင်နယ်တက်ရောက်မှု - ၁၅ကြိမ်
ဗုိုလ်စွဲ - ၁၁ကြိမ်
ဒုတိယ - ၃ကြိမ်
၂၀၁၇ - ?
ဖိုင်နယ်တက်ရောက်မှု - ၉ ကြိမ်
ဗိုလ်စွဲ - ၂ကြိမ်
ဒုတိယ - ၆ကြိမ်
(မြန်မာ့ ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကရော........ရီးယဲယ်လား....... ဂျူဗီလား?)
dawnmanhon: "ချန်ပီယံလိဂ် သရဖူကို ရီးယဲယ် ပထမဆုံး ကာကွယ်နုိုင်မလား"